WIC Smartphone अनुप्रयोग
WIC सहभागीहरूको लागी मोबाइल अनुप्रयोग।
सहभागीहरूलाई ती उपकरणहरू दिनुहोस् जुन तिनीहरू WIC मा पग्लान्।
हामी तपाईंको खाद्य सूची र अन्य सम्पत्तिहरू एक प्रयोगकर्ता अनुभव पूर्ण रूपमा तपाईंको एजेंसीमा अनुकूलित बनाउन बनाउन को लागी तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी स्थितिको बाहेक। WICShopper एक कस्टम प्यालेट हो कि मोचन र रिटेन्शन बढाउन मद्दत गर्दछ र सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको सहभागीले तपाइँको WIC कार्यक्रममा उनीहरूको समयको अधिक सदुपयोग गर्दछ।
स्वादिष्ट, स्वस्थ व्यञ्जनहरु मा आमाहरुलाई मद्दत गर्न तयारी गर्नुहोस् तिनीहरूको WIC फूडहरू।
सहभागीहरूले तपाइँको ट्यूटोरियल हेर्न सक्छन् र आफ्नो नजिकको WIC कार्यालय वा तुरुन्तै तपाईंको helpdesk लाई सम्पर्क गर्न सक्छन्।
वास्तविक समय लाभ
सहभागीहरूले उनीहरूको बाँकी फायदाहरूसँग खरिद गर्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई थाहा छ।
60,000 परिवारहरूले यस अगस्ट जारी जारी जमे भएका खाद्य सम्झनाको बारेमा पढ्छन्।
कस्टम खाद्य सूची
हामी तपाईंको खाना सूची लिन्छौँ र यो सुन्दर रूपमा एप भित्र प्रदर्शन गर्न डिजाइन गर्दछौं।
विक्रेताहरू र अफिसहरू
योग्य विक्रेताहरू र तपाईंको स्थानीय कार्यालयहरूको नक्शा स्थानहरू।
WICShopper 38 राज्य र WIC एजेन्सीहरू समर्थन गर्दछ
तपाईंको WIC EBT कार्डको अगाडि १ digit अंकको नम्बर प्रयोग गरेर रेजिष्टर गर्नुहोस्।
एकपटक तपाईंले आफ्नो कार्ड दर्ता गरेपछि, तपाइँको वर्तमान र भविष्यमा WIC सुविधाहरू स्वचालित रूपमा अनुप्रयोगमा डाउनलोड हुनेछन्।
WIC योग्यता प्रमाणित गर्न उत्पादनहरू स्क्यान गर्नुहोस्। सबै राज्यहरूमा, एपले तपाईंलाई भन्नेछ कि यो WIC लाई योग्य छ कि छैन। यदि तपाईंको सुविधाहरू डाउनलोड गरिएको छ भने, अनुप्रयोगले तपाईंलाई बताउँदछ कि यदि आइटम तपाईंको बाँकी लाभहरूको लागि योग्य छ भने।
यो एक WIC योग्य आइटम हो, तर तपाईंसँग यसलाई खरीद गर्नका लागि फाइदाहरू छैनन्।
तपाईं हाम्रा सहभागीहरूलाई नजिकका सबैबाट अनुप्रयोगहरूको बारेमा समीक्षाहरू विश्वास गर्नुहुन्न।
~ ब्राड क्रिस्टी, फ्लोरिडा
म यो अनुप्रयोग अप गर्न कसरी सजिलो छ भन्ने सोच्न खुसी हुनुहुन्थ्यो, तपाइँ अनुरोधित परिवर्तनहरू गर्न कसरी समायोजन गर्ने र, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो सहभागीहरूले कसरी प्राप्त गरेका छन्।
~ जुडी हॉज, मैसाचुसेट्स WIC
हामी अझै पनि संख्याहरू विश्वास गर्न सक्दैनौं!
यो एपलाई प्रेम गर्नुहोस् !! धेरै सहयोगी! अब म जान्छु कि मेरो छोरीको लागि। रसिफ बचत गर्न सट्टा। कागज रहित !! यो राम्रो तरिकाले हो। धन्यवाद!
~ WIC सहभागी
अनुप्रयोगलाई प्रेम गर्नुहोस्! सबैको सोझो सजिलो हुन्छ! धन्यवाद!
मलाई यो एप माया छ। यहाँ तपाईंको फायदाहरू जाँच्न सजिलो छ कि तपाईले छोड्नुभएको कुरा हेर्नको लागि रसिद खोजी बनाउदै बनाइयो। यो राम्रो काम गर्दछ!
ठूलो अनुप्रयोग! मलाई यो एप माया छ कि मैले छोड्नुभएका कस्ता लाभहरू याद गर्न सजिलो बनाउँछु!
यी नतिजाहरू जारी राख्ने जारी राख्छन् WICShopper सबैभन्दा राम्रो हो - र हाम्रा सहभागीहरूलाई उपलब्ध केवल एकदम प्रभावी WIC अनुप्रयोग।
म धेरै खुसी छु कि WIC यो एप छ र नि: शुल्क छ! म ग्राहक सेवा डेस्कको परेशानी बिना मेरो फोनको आराममा मेरो सन्तुलन जाँच गर्न सक्छु।
यो सम्भव बनाउनेको लागि धन्यवाद। साथै नुस्खा सेक्शनलाई प्रेम गर्नुहोस्। सँधै नयाँ बच्चाहरु खोज्दै मेरो बच्चाको लागि स्वस्थ बनाउन र I. फेरि तपाईलाई धन्यवाद!
नयाँ नवजात हुनुको धेरै मात्रामा ऊर्जा लाग्छ! तर यो अनुप्रयोगले मलाई मद्दत गर्दछ! मेरो विकिक खरीदारीमा मद्दत गर्न एक राम्रो अनुप्रयोगको लागि सोध्न सकेन
आलु संयुक्त राज्य अमेरिका
डा। यम परियोजना
ओरेगन WIC कार्यक्रम
तपाइँको एजेन्सी WICShopper मा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? हामी के गरिरहेका छौं र यसको अंश बन्न चाहन्छौ?
JPMA WIC कार्यक्रममा १२ बर्ष भन्दा बढी समय देखि संलग्न छ। बाट WIC क्लिनिक वा मोबाइल उपकरणहरूमा स्वास्थ्य र पोषण शिक्षा सुपरमार्केट चेकआउटमा, हामी नवीन समाधानहरू प्रदान गर्न कोसिस गर्दछौं जसले WIC कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाहरूको उद्देश्यहरू अगाडि बढाउँछन्।